नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : ओलीका यी चुनावी भाषणहरूमा सर्वाधिक प्रयोगमा आइरहेको ‘गिनिज बूक’, गफ र भ्रष्ट्राचार लाई केलाएर हेर्दा !
ओलीका यी चुनावी भाषणहरूमा सर्वाधिक प्रयोगमा आइरहेको ‘गिनिज बूक’, गफ र भ्रष्ट्राचार लाई केलाएर हेर्दा !
- केदार सुवेदी
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली पछिल्लो समय आफ्नो दुइतिहाइको सरकारको प्रचारमा हुनुहुन्छ। त्यो प्रचारको एउटा प्रमुख विषय हुनेगरेको छ – भ्रष्टाचार। पछिल्लो समय ओलीका यी चुनावी भाषणहरूमा सर्वाधिक प्रयोगमा आइरहेको एउटा सस्था ‘गिनिज बूक’ हो जो पटकपटक नै दोहोरिरहने गरेको छ। त्यसमा पहिले आफुले
गरेको विकास निर्माणको कुरा हुन्थ्यो। ओलीले आफ्नो कालमा भएका विकास निर्माणका काम ‘गिनिज बूक’ मा लेख्न रिपोर्ट गरियो भने त्यो नेपालको यो कामले मात्रै भरिनेछ भनेर पनि वताउनु भयो। त्यसमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरुद्धको ‘अभियान’ पनि जोडिन थालेको छ। चैत्रको तेस्रो हप्ता सुदूरको जिल्ला वाजुराको सदरमुकाम र यसको अघिल्लो हप्ता सुदूर पूर्वक इलामको सदरमुकाममा आयोजित आमसभामा ओलीका शब्द थिए –
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार निकै ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको उल्लेख छ। उसले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ को कुरा होयो। यो अध्ययनमा भाग लिएका मध्ये ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार असह्य रुपले बढेको भन्ने आफ्नो धारणा बताए। यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो  जसमा भ्रष्टाचार बढनुको कारक के होला र को होलान? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख उल्लेख भयो।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा देशका प्रधानमन्त्रीको नाम नै तोकेर लेखिनुले बुझाउने कुरा केहो ? नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको उदासीनता र अकर्मण्यताबारे लेख्नु भनेको त चिन्ताजनक अवस्था हो।’
त्यसबेला सरकारले भने यो प्रतिवेदनलाई आग्रह भनेर पन्छायो।यो नेपालको मात्रै प्रतिवेदन थिएन। कतिपय अरु देशका पनि यस्तै प्रतिवेदन आएका थिए। प्रधानमन्त्रीको नाम चाहि नेपालको मात्रै किटिएको हो। त्यो प्रतिवेदनमा नेपालपछि थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास प्रकट गरेका थिए। एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशत जनता मात्रै भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । यो मत सर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल, दक्षिण–पूर्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनाम, पूर्वी–एसिया र मध्य–एसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवानका तथ्यांक पनि यो ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को रिपोर्टमा परे ।त्यहाँका मानिसलाई पनि नेपालीलाई जस्तै र त्यही प्रकृया अनुसार यो रिपोर्टका लागि विभिन्न प्रश्न सोधिएको थियो । यो विवरणले के बुझाउछ भने भ्रष्टाचारबारे यो अध्ययन नेपालको मात्रै होइन। समष्टीकृत चित्र निकाल्ने प्रयासमा यी फरक–फरक दिशाका प्रतिनिधि देशहरू समावेश गरिएका बुझन सकिन्छ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भोलीपल्ट (११ मंसिर) सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट भ्रामक र पूर्वाग्रह रहेको भन्दै त्यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकार नगर्ने भन्ने जानकारी गराए। उनले भनेका थिए –